Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. रौतहटका अधिकांस स्वास्थ्य चौकीमा औषधी अभाव – Emountain TV
रौतहटका अधिकांस स्वास्थ्य चौकीमा औषधी अभाव
रौतहट, २७ भदौ । स्वास्थ्य चौकी र केन्द्रहरुमा आवश्यक औषधी पुर्याउने जिम्मेवारी स्थानिय तहको भएपनि रौतहटका जनप्रतिनिधिहरुले वास्ता नगरेपछि स्वास्थ्य सस्थाहरुमा अत्यावशकिय औषधीहरुको अभाव श्रृजना भएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरु समेत गैरजिम्मेवार बन्न थालेपछि विरामीको विचल्ली हुने गरेको छ ।
रौतहटका अधिकास स्वास्थ्य केन्द्रहरु वेथितीबाट गुज्रिएको छ । स्वास्थ्य सस्थाहरुमा सीटामोल बाहेक अरु औषधी पाउन छाडेको छ भने जिम्मेवारी अवधीमा समेत स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य सस्थामा भेटीन छाडेपछि उपचार सेवा लिन पुगेका विरामीहरुको विचल्ली भएको छ । रौतहटको गुजरा, चन्द्रपुर नगरपालिका लगाएतका अघिकांश स्थानियतहमा रहेका स्वास्थ्यकेन्द्रहरुमा औषधी अभावको समस्या श्रृजना भएको छ ।
बिरामीहरु राम्रो स्वास्थ्य उपचारको लागि सिमावर्ती भारतीय शहर या वीरगंज, चितवन एवं काठमाडौं जान बाध्य भएका छन । सरकारी अस्पतालमा पाउने कतिपय सेवा सुविधाहरू बिरामीलाई सरकारी अस्पतालले दिन छाडे पछि उपचार गराउन बिरामीहरूले बढी खर्च गरेर निजी अस्पतालहरुमा उपचार गराउन बाध्य भएका छन । विपन्न वर्गका नागरिकलाई भने सरकारी अस्पतालको सहुल्यत सुविधा नपाएपछि रोग पालेर घर फर्कन बाध्यता छ ।
सघिय संचना अनुसार स्थानिय स्वास्थ्य केन्द्रहरु स्थानिय तह अन्तर्गत रहने प्रावधान छ । तर स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुले स्वास्थ्य सस्थामा ध्यानै नदिएपछि औषधी अभाव भएको हो ।
सरकारको निति नै अस्पष्ट भएकाले स्थानिय तहका कर्मचारीबीच समन्वय नहुने र त्यसको असर स्वास्थ्य चौकीमा देखिने गरेको जनप्रतिनितिहरुको भनाई छ । अस्पतालमा भएका सबै औषधि बाहिर लगेर बेच्ने गरेको कतिपय सर्वसाधारणको आरोप छ । जिल्लाका अधिकाश स्वास्थ्य केन्द्रहरु औषधि बिहीन हुदा पनि सम्वन्धित निकायले हेर्न सकेका छैनन । औषधी अभाव र स्वास्थ्यकर्मीहरुको लार्पवाहीका कारण रौतहटका बिरामीहरुले पिडा खेप्दै आएका छन ।